Maamulka baraha bulshada | Suubbis Blog
Maamulka baraha bulshada waa abuurista iyo Soo Dhajinta Macluumaadka kusabsan Mawduucyada baraha Bulshada
Qayb weyn oo ka mid ah maareynta warbaahinta bulshada(social media management) ayaa abuuraya oo bahinayo waxyaabaha miidhiyaha ah ee warbaahinta guud ee shirkadahaaga. Tani waxay ku lug leedahay ma aha oo keliya qorista nuqul ah laakiin sidoo kale waxay abuureysaa hal abuur nimo qaab muuqaal ama qoraal ah.
Marka laga reebo waxyaabaha ay ka kooban yihiin, ganacsiyada markasta waxay sidoo kale kula wadaagi doonaan maadooyinka la isku-daboolo ee laga helo ilaha saddexaad ee mawduucyada ku habboon.
Tilmaamahan maareynta warbaahinta bulshada wuxuu kaa rabaa in aad si qotodheer u fahantaan mashaariicda warbaahinta bulshada iyo daawadayaashaaga. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa hababka ugu wanaagsan ee loogu talagalay abuurista xogta kanaalka. Laakiin waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad ogaato nooca mawduucyada iyo mawduucyada ay ka codsanayaan inta badan dadka dhageystayaasha ah.
Ka jawaabista taageerayaasha Ka jawaabista taageerayaasha iyo taageerayaasha bogaggaaga warbaahinta bulshada waa qayb muhiim ah oo ka ah maamulka warbaahinta bulshada. Marka uu qof faallo ka bixiyo boggaaga su’aal ama walaac, tani waxay soo bandhigeysaa fursad cusub si aad u bixiso qiimaha jihadaada markaad muujinayso adeegga macaamiisha aad u fiican.
Iyada oo qayb ka ah maareynta warbaahinta bulshada, ganacsigaaagu waa inuu si joogto ah u eegaa faallooyinka ama farriimaha hareerahaaga bulshada. Si taxaddar leh uga feker inta aanad jawaab bixin sababta oo ah jawaabtu badanaaba waa dadweynaha. Ha haysan waqti aad sidaan sameyso? Dhakhaatiirtayada ee LYFE Nidaaminta Suuq-geynta ayaa xisaabiya maalin kasta, iyo sida ugu dhaqsiyaha badan waxay markasta uga jawaabaan dadka raacsan 24 saacadood gudahood.
Waa maxay maareynta warbaahinta bulshada
Miyaad ka jawaabeysaa taageerayaasha miidhiyaha bulshada? Ama iyaga oo mugdiga ku dhex jira?
La shaqaynta dadka isticmaala warbaahinta bulshada ayaa ka baxsan kaliya ka jawaab celinta taageerayaasha ama taageerayaasha kuwaas oo ka faallooda bogga ganacsigaaga ama fariin dirid. Tani badanaa waxaa ka mid ah raadinta jihooyin cusub ama fursado kale oo ay ku bilaabi karaan sheekada iyaga oo ku jira barxadda.
Dhisida xiriirka leh saamileyaal ayaa kaa caawin kara inaad ballaariso gaarikiina waqtiga ku habboon. Haddii ay jiraan shakhsiyaad ama ururro shaqsiyadeed oo ku yaal warshadahaaga oo leh muhiimad soo socota, ganacsigaadu waxay gaari kartaa iyaga si ay u helaan fursado cusub si ay ula wadaagaan content qiimaha leh saldhiga isticmaalkooda.